अण्डाको बोक्राले चम्किनेछ तपाईंको अनुहार, तर कसरी गर्ने प्रयोग ? – Sandesh munch
अण्डाको बोक्राले चम्किनेछ तपाईंको अनुहार, तर कसरी गर्ने प्रयोग ?
प्रकाशित मिति: शनिबार, पौष २५, २०७७ समय: २०:५४:०३
एजेन्सी । अण्डाको बोक्राको प्रयोग गरेर सुन्दरता हासिल गर्न सकिन्छ भन्दा तपाईलाई विश्वास लाग्दैन होला ? अण्डा खाएपछि बोक्रोलाई तपाईले फल्ने गर्नु भएको होला तर यसका धेरै फाइदा रहेका छन् ।
छालालाई राम्रो, मुलायम र अनुहारलाई चम्किलो बनाउन अण्डाको बोक्रा प्रयोग गर्न सकिने एक अध्ययनले देखाएको छ ।
अण्डाको बोक्रामा प्राकृतिक प्रोटिन र भिटामिन पाइन्छ अतः यसले छालालाई जवान र चम्किलो बनाउँछ । अण्डाको बोक्राको पाउडर दुई चम्चा लिनुहोस् र त्यसमा मह र बेसन मिसाउनुहोस् ।
यो मास्कलाई अनुहारमा लगाउनुहोस् र १५ मिनेटपछि धुनुहोस् । यो प्रक्रियालाई हप्तामा तीन वा चारपटक अपनाउनुहोस् र जवान र चम्किलो छाला पाउनुहोस् ।
शोधका अनुसार जो महिलाको उमेर ३० पारी छ उनीहरुले अण्डाको बोक्रालाई आफ्नो सौन्दर्य दिनचर्यामा अवश्य पनि समावेश गर्नुपर्छ । अण्डाको बोक्राको पाउडर ३–४ चम्चा लिनुहोस् र यसमा दही मिसाउनुहोस् ।
यसमा एक चिम्टी बेसार मिसाउनुहोस् र यो पेस्टलाई अनुहारमा लगाउनुहोस् । यसलाई २० मिनेटपछि पखाल्नुहोस् ।
अण्डाको बोक्राले बनेको मास्क बुढ्यौलीको संकेतलाई कम गर्ने गर्दछ । यसले अनुहारबाट चाउरीलाई टाढा राख्छ ।
यदि तपाईंको आँखा मुनीको छाला सुख्खा छ र छालालाई पुनर्ज्विित गर्नका लागि अण्डाको बोक्रालाई प्रयोगमा ल्याउनुहोस् । २–४ चम्चा अण्डाको बोक्राको पाउडरमा मह मिसाउनुहोस् ।
दुबै पदार्थलाई निकै राम्रोसँग मिसाउनुहोस् र यसलाई छालामा लगाएर गोलाकार दिशामा आँखा वरिपरि मसाज गर्नुहोस् ।
प्रत्येक दिन सुत्नुभन्दा पहिले यो मास्कको प्रयोग गर्नुहोस् किनभने यस्तो गर्दा आँखा मुनीको छाला निकै समयसम्म नरम भइरहन्छ ।
थुप्रै मानिसहरुलाई छाला चिलाउनेजस्तो समस्या हुने गर्दछ । आफ्नो छालाको हेरबिचारको दिनचर्यामा अण्डाको बोक्रलाई समावेश गरेर तपाईं छालालाई आराम प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ र छाला पोल्ने समस्या छ भने तुरुन्त आराम पाउन सक्नुहुन्छ ।
एक कप एप्पल साइडर भिनेगर लिनुहोस् र त्यसमा अण्डाको बोक्राको पाउडर मिसाउनुहोस् । यो मिश्रणलाई सेट हुन दिनुहोस् र यसलाई १० मिनेटसम्म यत्तिकै छोडिदिनुहोस् । अब यो मिश्रणलाई छालामा लगाउनुहोस् र जवान र चम्किलो छाला प्राप्त गर्नुहोस् ।
अण्डाको बोक्रा एक प्राकृति पदार्थ हो जसले छालालाई भित्रैदेखि सफा गर्दछ र रोमछिद्रलाई खोल्दछ ।
अण्डाको बोक्राले रोमछिद्रमा जमेको फोहोर र धुलो सफा हुने गर्दछ जसका कारण रोमछिद्र बन्द हुन दिँदैन । अण्डाको बोक्राले बनेको मास्क तपाईंको छालाको लागि निकै फाइदाजनक हुन्छ ।
अण्डाको बोक्राले छालालाई चम्किलो बनाउँछ । अण्डाको बोक्राको पाउडरमा थोरै कागतीको रस र कोयलाको पाउडर मिसाउनुहोस् । यो मास्कलाई अनुहारमा लगाउनुहोस् र आधा घण्टापछि पखाल्नुहोस् ।
अण्डाको बोक्रामा ब्लिचिङ र छालालाई चम्किलो बनाउने गुण पाइन्छ । यदि तपाईं छालालाई चम्किलो र जवान राख्न चाहनुहुन्छ भने यी तरिका अपनाउन सक्नुहुन्छ ।